ny Breziliana inona izy ireo
Matetika ny olona no manontany ahy hoe inona ny tena izy, ireo Breziliana. Azonao atao ny hanome ny valiny, saingy fotsiny izy mba hanamafisana fa tsy milaza ny Breziliana rehetra amin’ny borosy iray ihany, toy ny any an-kafa no hevitry ny ‘mahazatra toerana’, ary ny hevitra ny maningana ny fitsipika, ary koa ny foto-kevitra ‘an’isa’. Noho izany, ireo izay lehibe amin’ny heviny avy amiko, dia tsy ilaina mba hanaporofoana na miady hevitra. Vao mahatakatra fa ny olona rehetra izay niaina na dia ao Brezila nihaona tamin’ny olona isan-karazany teny an-dalana, ary amin’ny Ankapobeny ny antontan’isa, dia mazàna ny hiala farany heviny momba ny kolontsaina, ny toe-tsaina, ny firenena, ny toetoetra, ny fahalemeny, ary ny toetra. Ny ankamaroan’ny Breziliana lahy dia iray tena toetra mampiavaka: ny tsy fandraisana andraikitra, miaraka immaturity matetika na rehefa dimy amby roapolo taona. Amin’ny Ankapobeny io toerana, izay toy ny hoy aho hoe misy ny vitsy an’isa maningana. Izay ny tsirairay dia ho lavo ny anao manokana, dia ho afaka ny mandrefy hoe fotsiny noho ny zavatra ataontsika. Izany dia ny lehibe hanapaka — hijery ny Breziliana tsy amin’ny teny, raha tsy amin ny asany. Ny hany fomba. Fa raha tsy izany dia mety ny misotro ny mangidy sy ny fahadisoam-panantenana ny alalan ny tampon-trano.) Feony: ny ankamaroan’ny Breziliana efa malefaka izy, feo mahafinaritra. Fa tsy ny rehetra. Ny sasany dia mety ho squeaky.) Volo: mainty volo, na olioly na wavy (mahitsy ho any Brezila tsy fahita firy). Na Afrikana volo dia toy izany supermarche.) Akanjo: ny ankamaroan’ny Breziliana miakatra avy ny pataloha Bermuda. Bermuda dia pataloha pataloha fohy short. Amin’ny Ankapobeny, ny lohalika, zavatra. Ny toetr’andro indrindra. Fa ny asa mbola manao akanjo lava ara-dalàna.) Fahazaran-dratsy: ny fifohana Sigara tsy matetika loatra. Ankapobeny: labiera, mpisotro toaka, zava-pisotro, ary ny sasany strata ny fiaraha-monina: ny ahi-dratsy, kôkainina, ny fihetseham-Po: tsy fihetseham-po, mihoatra noho ny eo amin’ny faritra Avaratr’i latitudes. Matetika saro-pady. Tantaram-pitiavana ary entanim-pitiavana. Haingana mazava sy mangatsiatsiaka nidina haingana) ny Fahalemeny: tsy tompon’andraikitra sy infantile. Matetika ny ray aman-dreny amin’ny fanabeazana mitombo ny tsy fahatakarana tanteraka ny zavatra mba hanampiana ny manodidina ny trano. Matetika ny tsy fisian’ny herim-po sy ny filazana ny fanomezana ho an’ny vehivavy (toy ny fehezam-boninkazo, na zavatra) Miiba: maro foana ny resaka sy fampanantenana, vitsy dia vitsy ny toe-javatra (izany hoe, ireo izay fampanantenana sy manatanteraka — mihoatra ny iray fahita firy noho ny mahazatra. Norma hoy, fa tsy.) Ho an’ny sasany eo amin’ny ambaratongam-pahefana ny firaiketam-po eo amin’ny toerana voalohany ny baolina kitra ny ekipa, dia Andriamanitra sy ny fianakaviana. Ireo tafahoatra. Ho an’ny maro, ny fialam-boly fotsiny dia: milalao baolina fandàka ao an-toerana ny tarika mpilalao baolina kitra (boaty ho an’ny faritra tsirairay ao an-tanàna), capoeira (tsy maro mpankafy toy izany toa), ny Samba (na dia tsy), amin’ny ankamaroan’ny toe-javatra, ny tena fialam-boly fotsiny ny eo ho eo ny Breziliana mandany ny hariva ao amin’ny trano fisotroana amin’ny namana ny labiera iray vera amin’ny sira ny voanjo, ny ovy voaendy amin’ny fromazy, tsara, raha ny vehivavy iray eo akaiky eo, dia bebe kokoa, ary ny faniriana na inona na inona. Tsara, ny faran’ny herinandro dia sharashka sy baovao hafa amin’ny namana sy ny fianakaviana. Misy zavatra toy izany ho toy ny pizza ny andro, misy mpivady fa hitondra voatondro iray andro ny herinandro sy ny pizza (na maro pizzas) dia mety ho tena sakafo amin’ny sakafo antoandro na ny sakafo hariva. Toy ny ao ny endrika ‘ny filaminana ao an-trano’ ka mandehana any amin’ny pizza toerana. Ao amin’ny sarimihetsika, ny Breziliana mandeha ny ankamaroany amin’ny namana, sipa, mpivady na ny vondrona ny namana, na olon-droa. Ao anatin’ity sokajy ity ao amin’ny ny mponina amin’ny Ankapobeny hatramin’ny dimy amby telo-polo taona.) Ny toe-tsaina manoloana ireo lehilahy hafa: toy ny vehivavy, maro amin’ireo Breziliana saro-piaro. Ny marina dia tsy mba toy izany betsaka toy ny vehivavy. Miala tsiny mba hanaiky, fa ny herisetra an-tokantrano ao Brezila eo amin’ny mpivady dia tsy vitsy. Matetika ny vehivavy mijaly noho ny habibiana sy herisetra ao an-tokantrano. Tsy fantatro ny antontan’isa, fa eo amin’ny sehatra nasionaly no hotlines ho ara-tsaina hanampy sy hanao tatitra ny toe-javatra mba manara-maso ny zava-misy. Fa dia ianao, dia mila takatrao fa tsy ny zavatra rehetra no tena malama. Tsy fahita firy, fa misy ny toe-javatra ny famonoana olona atosiky ny fialonana, toy ny vehivavy sy ny vadiny. Fa bebe kokoa ny any amin’ireo faritra ambanivohitra, izay matetika ny olona tsy manana hevitra momba ny fenitra sy ny fitsipi-pitondrantena.) Tsara ray: ny Ankamaroan’ny Breziliana ho tsara, dia tompon’andraikitra ny ray, ny fikarakarana sy hihaino, afa-tsy manam-paharoa ny fisotroana ao ny telo-polo taona. Mialoha izany, afa-tsy kely ohatry ny Breziliana dia mety ho mifandray amin’ny foto-pisainana ‘ny tsara i dada’. Fa rehefa — ny zava-misy. Eto dia ny mahazatra endri-javatra dia afaka mahita ao ny Breziliana ny olona, ry zalahy sy ny ankizilahy. Araka ny voalaza teo aloha, izany dia fironana Ankapobeny, saingy tsy ny rehetra.
Misy hatrany ny maningana. Fa ny ankapobeny antontan’isa tantara Hitako ny fomba (indrindra fa rehefa ny Breziliana tovovavy na vehivavy anjara eo amin’ny fifandraisana amin’ny Breziliana, ny tantara dia matetika tena mitovy ireo voalaza etsy ambony. Tiako ny milaza azy ireo ho toy ny tantaram-pitiavana, fa manjavozavo. Misalasala, tsy matotra. Eny, izy ireo dia efa izay matetika no tsy ampy eo amin’ny bitro dia ny fisokafana ny fihetseham-po, ny fahaizany mba hamaky ny fihetseham-pony ny olona, ny teniny, ny fihetseham-po. Na izany aza, mba hanaraka ny filan’ny nofo rehefa mifandray aminy, dia afaka ny ho mangidy ny bebe kokoa amin’ny fahatakarana fa bebe kokoa ny filan’ny nofo sy ny olon-tiany ny fifandraisana dia handeha na aiza na aiza. Iray Ankapobeny toro-hevitra ho an’ny olona rehetra te-hanana fifandraisana amin’ny Breziliana na Breziliana. Ho an’ny lehilahy, tsy misy na inona na inona ny fahazoan-dalana hidirana, satria manokana fifaliana ao ny manokana ny fiainana tsy vita fizahana, saingy araka ny antontanisa misy Breziliana, ny fanahiko dia vonona ny handeha hanambady azy ireo. Manana ny hatsarany mafana amerika latina sy ny Breziliana ny ra any amin’ny tany mafana. Mora kokoa ny miteny hoe Breziliana dia matetika toy ny Tropicana (tadidio izany teny.) Ary amin’ny fanajana ny Breziliana tovovavy, raiki-pitia amin’ny Breziliana. Izany dia tsara kokoa ny mifidy ireo izay efa nandao ny ray aman-dreny an-trano, nanao zavatra ny tenany. Ireo izay tena manao ny zavatra sasany noho ny anareo, rehefa iray resaka ary tsy misy tranga — tsara ny mihazakazaka haingana kokoa amin’ny manenjika, ny hiova izy dia tsy miova, ary ny hozatra sy ra zava-pisotro, sanatria. Nefa ianao dia niampanga fa ianao koa mitaky Breziliana tovovavy ary maro koa ny te-avy aminy, mahantra zavatra. Taona aho hoe tonga lafatra taona teo anivon ny Breziliana miainga avy amin’ny telo amby telo-polo. Tamin’ny taona ity izy ireo tamin’ny farany vonona ho amin’ny fifandraisana matotra, ny fanambadiana, ny fianakaviana, ny andraikitra, ny vady, ny zanaka. Ary vonona ny handray izany andraikitra izany. Amin’ny toe-javatra sasany, na dia taona ity dia tsy handroso, satria ny sasany Breziliana ary izy ireo neny ny zazalahy kely efa-polo taona, dia matetika tsy afaka na dia miaina miaraka amin’ny ray aman-dreniny efa ho. Fa ny tsy fahita firy, fa misy. Taona fetra dia avy amin’ny roa-polo amby telo-polo na mihoatra kevitra tantara foronina, azo atao ny fanambadiana, fa matetika kokoa mikorosy fahana. Izy ireo mbola tsy matotra, maitso, mamy sady be ranony vao eo ivelany, nefa ny ao anatiny dia tena tsy matotra voankazo. Raha fintinina, dia mba tiako ny manao fampitahana toy ny mioty ny voankazo ety ivelany, ny matsiro sy mamy, fa raha vao tonga ny pulp ianao dia hahita fa izy dia mbola mihantona, ary mihantona eo amin’ny masoandro. Toy izany. Hitako samy hafa fianakaviana, ny fanambadiana, ny toe-javatra. Ny tena mirindra sy ny fanambadiana sambatra Breziliana, raha ny lehilahy iray no ho eo ambanin’ny efa-polo taona. Tsy ny teo aloha. Avy eo izy dia ny ho tia mikarakara, ho tony, mihoatra na latsaka ny tompon’andraikitra, amin’ny Ankapobeny, efa matotra. Afaka mihinana sy mangeja. Sy miara-miaina amin’ny svekrovi sy ny fianakaviana manontolo dia tsy maintsy. Izy dia efa mijoro mafy teo amin’ny tongony sy mahalala izay tiany eo amin’ny fiainana. Saingy tahaka ny milaza izy ireo, amin’ny toe-javatra rehetra iray ny Filan-kevitry ny tsy misy.
Voankazo — tsy ry zareo rehetra izany. Ary na oviana na oviana ianao mahalala anao miavaka mahazo. Na dia tsy handoka ny tenanao tsy ho ela koa, ny olon-tiany, ny fahazarana sisa tavela. Ny Breziliana dia vonona ny fiainako rehetra, mba hanantona ao an-toerana ‘fotsiny miara-miaina’ — toy ny any ny fahazavan-tsaina sahady ny ‘mpivady’, na dia tsara kokoa, ny tsirairay. Noho izany dia afaka ho velona mandritra ny taona maro. Ary afa-tsy eo ambany fanerena avy ny vehivavy, ny Breziliana dia handeha hanao tsara ny zava-drehetra. Ny mampiavaka amin ny fahatakarana an ‘taty aoriana dia-tany am-piandohan’ity’ manambady any Brezila sy any Brezila dia tena samy hafa. Ny breziliana dia tsy mino fa raha toa ianao ka tsy te-ary ho spinster. Ho azy ireo, ny fe-potoana io raha ny marina nifehy ny efa-polo taona. Ary na dia bebe kokoa. Rehefa ankizy rehefa afaka efa-polo dia tsy noheverin’ny sasany fahagagana. Izany ihany koa noho ny hoe hanambady ny ara-dalàna ny olona mandra-pahatongan’ny dimy amby telo-polo taona no tena sarotra
Breziliana ny lahatsary amin'ny chat online Dating, video Mampiaraka amin'ny chat →